Sida loo noqon turjumaanka luqadda ama turjumaan | khayraadka shaqada USAHello | USAHello
Sida loo noqon turjumaanka luqadda ama turjumaan
turjubaano Language iyo turjumaanada waa mid aad u muhiim ah in bulshooyinka cusub ee USA. Haddii aad leedahay xirfadaha luqadda wanaagsan, ayaa kaa caawin kara muhaajiriinta iyo qaxootiga ku guuleystaan ​​inta aad u helaan nolol. Ogow waxa aad u baahan tahay in la ogaado oo ku saabsan sida si ay u noqdaan turjubaan, Turjubaankii, ama labadaba.
Waa maxay turjumaanka luqadda? Waa maxay turjumaan?
turjumaanka luqadda A badala erayo lagu hadlo mid ka mid afka luqad kale. isbedel A turjumaan macluumaad qoraal ah oo ka mid ah luqadda in luqad kale. Waxaa jirta baahi weyn u turjumaanada ee beelaha cusub. Waxay kaa caawin muhaajiriinta iyo qaxootiga inay la xiriiraan iyo ku guulaystaan ​​Maraykanka.
Maxaad ka fili kartaa in shaqada of turjumaan ama turjumaan?
Waajibaadka turjumaanka luqadda iyo turjumaan
Waajibaadka turjumaan waa in la beddelo warqad oo ka mid luqad kale iyo si loo hubiyo in turjumaad sax yahay. Waxaa sidoo kale shaqo ee turjumaan si loo hubiyo in ay u isticmaalaan erayada cad oo sax ah oo ku qoran luuqad ay tarjumaadda in. Tani waxay si gaar ah muhiim waraaqaha adag tahay sida waraaqaha sharciga.
Waajibaadka turjumaanka luqadda yihiin in ay qaataan macnaha erayo kale qof, dhagaysan, iyo aad u hesho macnaha guud ee luqad kale.
In labada shaqo, waajib muhiim ah waa in la hubiyo in macnaha Gudoomiyaha asalka ama qoraa waa cad. Tani waxay ka dhigan tahay in Dhawrsada AAN in aad ku darto ama ka qaadi macnayaasha. Waad awoodaa akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa Turjumaanada Afka iyo samayn.
Daawo video ah oo ku saabsan waajibaadka iyo turjubaanada
Turjubaano shaqeeyaan laga yaabaa in meel kasta oo dugsiga ah in xero qaxooti oo si boardroom.They ganacsi laga yaabaa in u baahan tahay in ay u safraan badan. Translators inta badan ka shaqeyn kartaa guriga ama xafiiska u gaar ah.
Mushahar iyo turjubaanada
turjubaano waqti-buuxa iyo turjumaanada kasban karaa $25,000 in ka badan $83,010. Laakiin shaqada ugu badan ee iskaa wax u qabso.
Waa maxay nooca qofka ka dhigaysa turjumaan wanaagsan ama turjubaan? Tani waa shaqo aad u fiican qof kasta oo raba in ay caawiyaan dadka ka soo jeeda ay u gaar ah. turjumaanka luqadda A naftiisa ama nafteeda ka heli kartaa in xaalad adag ama xasaasi ah. Tusaale ahaan, aad fasiri laga yaabaa in dhagaysiga sharci ah ama xafiiska dhakhtarka. Sidaas qof ku haboon shaqada uu noqon doono is dajiyaan oo sii hab xirfadeed xaaladaha oo dhan. Haddii aad jeclaan qoraal iyo waa qoraa cad iyo naxwe ah, markaas turjumaad noqon doono taam wanaagsan oo kuu.
ixtiraamka dadka kale
wanaagsan at dhegeysiga
ogaanshaha dhaqanka (fahamka aragtiyaha kala duwan)
runsheegnimada (wax haynta gaarka ah)
waafajinta (awoodaada shaqo ee xaaladaha adag)
sax (awoodda ay si sax ah u gudbiyo faahfaahin yar iyo dhibcood adag)
kuhadalka fiican in ugu yaraan laba luuqadood
naxwaha fiican iyo xirfadaha qoraalka (turjumaad)
aqoonta qaar ka mid ah eraybixinta caafimaadka, iyo sharci (haddii aad turjumo ama turjumaan macaamiisha sharci iyo bukaannada caafimaadka)
xirfadaha kombiyuutarka, gaar ahaan diiwaan formatting (waayo, turjubaanada)
xirfadaha laba luqoodlayaasha ah isreebreebka ugu muhiimsan turjumaan ama turjumaan. laga yaabaa in aad hore u leedahay kuwa. Waxaa jira aqoonsiga kale waxaad u baahan doontaa shaqooyin gaar ah.
degree A ee English ama luuqada kale ee aad kaa caawin doona inaad hesho Afcelinta iyo Tarjumida shaqooyinka ururada waaweyn. Sidoo kale waxaad qaadan kartaa koorsooyinka qaarkood si gaar ah oo ku saabsan tarjumaadda iyo fasiraadda. Eeg liiska Translators American Association of dugsiyada turjumid ansixiyay. koorsooyinkan uma baahnid inaad cadeynayaa, laakiinse iyagu tareenka ee xirfadaha aad u baahan doontaa inaad ku fiican tahay in aad shaqo ahaan.
Waxaad u baahan doontaa shahaado in ay ka shaqeeyaan sidii turjumaan ama turjumaan ee dowladda, sharciga, ama daryeelka caafimaadka.
turjubaanada Medical iyo turjumaanada
Waxaad heli kartaa shahaado by ka Guddiga Qaranka ee Certification for Turjubaano Medical ama iyoWaxaad heli kartaa shahaado by Guddiga Certification for Turjubaanada Daryeelka Caafimaadka.
The National Association of Garsoorka Turjubaano caddeynaya turjubaanada in nidaamka sharciga.
turjubaano Dowladda iyo turjubaanada
The US State Department iyo Sirdoonka Maraykanka leeyihiin imtixaanada iyo geedi socodka u gaar ah oo ay.
Khibrad waa tababarka ugu fiican ee Turjumaanada Afka iyo. Haddii aad ku nooshahay xaafad la oo cusub oo badan, waxaad ka heli doontaa siyaabo badan si ay u helaan waayo aragnimo Afcelinta iyo Tarjumida Qoraalka. Waad ku tabaruci kartaa meel kasta oo loo baahan yahay inaad.
Weydii dugsiga maxalliga ah haddii ay u baahan yihiin caawinaad turjumaan loogu talagalay waalidiinta ama tarjumaadda dugsiga ee ardayda.
Your rugta daryeelka caafimaadka iyo isbitaalka u baahan karaan mutadawiciin si ay u caawiyaan bukaanada fahmaan tilmaamaha iyo waraaqaha.
Waxaad ku caawin kartaa xarumaha cusub iyo ururada kale ee bulshada.
si ay u bixiyaan adeegyo aad Tarjimly - adeeg turjumaad on-baahida loo qabo qaxootiga.
Baro maamulka kale ee dawladda iyo shaqooyinka adeegga dadweynaha
Qaado koorso dhalashada our free online
khayraadka mustaqbalkiisa American Translation Association
Shaqooyinka turjumaada Online at Gengo.com